Ukusingatha iZiliphu - i-802Quits
Ikhaya » Iivenkile » UKUHLALA PHANTSI » Ukuphatha iZiliphu
Ukuyeka ukutshaya, ukutshaya okanye enye icuba kufana nokufunda isakhono esitsha-njengokudlala ibhola yomnyazi okanye ukuqhuba imoto. Into ebaluleke kakhulu ukuba uyenze kukuziqhelanisa-kuba ngalo lonke ixesha uzama ukuyeka, ufunda into entsha. Kungenxa yeso sizathu zonke izibalo zibaliwe. Qiniseka ukuba uzinika ityala ngawo wonke umsebenzi owenzayo ukuyeka. Ungalibali, ukuba ufuna uncedo oluncinci ukuze uhlale uyeke, ii-802Quits zibonelela ngokwezifiso uncedo ngomnxeba (1-800-YEKA-NGOKU), ngobuqu bomntu nakwi-intanethi.
Ngamanye amaxesha, nangona injongo kukuyeka ngokupheleleyo, unokutyibilika. Zonke iindlela zokutyibilika kukuba ufuna ukuziqhelanisa nokusingatha imeko ethile. Isitshixo kukuba buyela ngqo kumkhondo kwaye ungavumeli isiliphu singene endleleni yakho. Kungokwemvelo ukuziva uphantsi okanye uneengcinga ezimbi malunga nokunqwenela icuba okanye isiliphu. Yilungiselele le nto, kwaye ungavumeli iimvakalelo ezingalunganga zikwenze ubuyele ekutshayeni, ekuphefumleni okanye kwenye icuba.
khumbula: Isiliphu sisiliphu nje. Oko akuthethi ukuba uyatshaya, ungumvuni okanye usebenzisa icuba kwakhona. Ukuhlala ungenayo icuba kunokuba nzima. Landela la manyathelo ukukunceda uhlale uyeke. Ukuba uye wabuya umva, khumbula, abantu abaninzi bayatyibilika! Cinga nje ukuba uhambe kangakanani kolu hambo lokuya kubomi obungenacuba obuya kukunika inkululeko engakumbi yokonwabela ezinye izinto. Vele ubuyele "emgceni."
Ungaze uzilibale izizathu zokuyeka isikolo.
Sukuthatha nje "ukukhupha oku-1" komnye umdiza okanye "ukuhlafuna nje" ukutshaya icuba okanye "1 vape-hit".
Musa ukuzithethelela kwaye ucinge ukuba unokufumana enye.
Cwangcisa iimeko ezinobungozi (isithukuthezi, ukusela utywala, uxinzelelo) kwaye uthathe isigqibo ngento oza kuyenza endaweni yokusebenzisa icuba.
Zivuze ngokungasebenzisi icuba. Sebenzisa imali oyigcinileyo ekubeni ungathengi iisigarethi okanye ezinye iimveliso kwinto ethile ebalulekileyo kuwe. Inokuba nkulu njengemoto esele isetyenzisiwe, kuba ipakethi enye yecuba ngemini inokubiza ngaphezulu kwe-1 zeedola ngonyaka.
Yiba neqhayiya ngokuzama ukuyeka ukutshaya kwaye wabelane ngebali lakho nabanye.
Qala ukucinga ngathi ungatshayi, ungatshayi.